Activate Windows 10 Pro Permanently – Hein Htet Kyaw
By Hein Htet Kyaw August 5, 2019 1 Min Read
Website ကြီးဝယ်ပြီး ဘာမှ မရေးဖြစ်တာလဲ ကြာပြီ ဆိုတော့ Domain က နှမြောဖို့ကောင်းနေကောပဲ . . .
ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးမှာ အရေးကြီးတာကတော့ Window တစ်ခုတင်ဖို့က လူတိုင်းလိုလိုအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အပိုင်း တစ်ခုလိုကို ဖြစ်နေပြန်တယ်ဆိုတာ ငြင်းလို့မရတော့ဘူး။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ Window XP တွေ7တို့ Support ကို အပြည့်အဝမရတော့တဲ့အတွက် . . . Window 8 ကလဲ ကွန်ပျူတာတိုင်းနဲ့ အဆင်မပြေတဲ့အတွက်၊ Windows 10 က နောက်ဆုံး Version တိုင်းကို Update ရတဲ့ အတွက် xD ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး Window ကိုပြောပါဆိုရင် Windows 10 ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံး Version တိုင်းကို Update ရသလို License Key ဆိုသည်မှာလဲ အခုအချိန်အထိ အဆင်ပြေနေသေးတဲ့အတွက် သုံးဖြစ်နေသေးတယ်လို့ပြောကမှာပေါ့။
Windows 10 သုံးရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုက Window Update လေးတွေကို ရတာ ကျေနပ်မှုမျိုး ဘာနဲ့မှ လဲလို့မရဘူးဆိုသလိုပေါ့ဗျာ။ အရင်တုန်းကအချိန်တွေ မသိခင်တုန်းကတော့ Windows Update ကို Disable လုပ်ပြီး Phone Bill တွေ ကုန်မှာ ကြောက်ခဲ့ရဘူးတယ်။ နောက်ပိုင်း Broadband တွေ Wifi တွေပေါများလာတော့ ဘာမှ မဟုတ်ရင်တောင် Window က Update မပေးဘူးလားဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေးနဲ့ သွားသွားပြီးတော့ Update လုပ်ကြည့်နေမိသေးတယ်။ License Key ဝယ်သုံးချင်ပါသော်လည်း တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကို ပေးရတဲ့ ငွေက များလွန်းနေတော့ ဝယ်သုံးဖို့ စိတ်ကူးမရှိသေးဘူးဆိုတော့ ဒီတိုင်းပဲ Patch ပြီး သုံးနေမိသေးပါရဲ့ . . .
သူများတွေ အတွက်ကော စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအတွက်ပါ ကျွန်တော် တွေ့ထားတဲ့ နည်းလမ်းလေး တစ်ခုကို မျှဝေပေးသွားချင်လို့ပါ xD Window တင်ပြီးတဲ့ Computer တိုင်းကော စက်တော်တော်များများမှာ စမ်းလို့ အဆင်ပြေတဲ့ အတွက် ပြန်မျှပေးလိုက်ပါတယ်။ ဝယ်သုံးနိုင်တဲ့လူတွေကတော့ ဝယ်သုံးဖို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဝယ်မသုံးချင်လို့ Open Source သုံးတဲ့လူတွေကလဲ Foul မထုဖို့ မေတ္တာရပ်ခံရင်းနဲ့ Sharing လေးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ခိုးကူးတွေလဲ မလုပ်ကြဖို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းမရေးဖြစ်တော့တဲ့ Sharing တွေက ကိုယ့် Website က Content တွေကို အခြားလူတွေ ကူးယူပြီး Credit ဆိုတဲ့ စကားလုံး တစ်လုံးနဲ့ ကုန်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေ လေ့လာခဲ့ရတဲ့ စမ်းခဲ့ရတဲ့ အရာတွေ အကုန်လုံးနဲ့ မညီမျှမှုတွေကြောင့် ကျွန်တော် မရေးဖြစ်တော့တာပါ။
အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ နည်းပညာအကြောင်း ဘယ်သူမှ မရေးတော့တာနဲ့ စိတ်ပါတုန်းလေး ပြန်ရေးရင်း အပေါ်က အကြောင်းကတော့ အရင်က ဘာဖြစ်လို့ Post မရေးခဲ့ရသလဲဆိုတာကို ပြောပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် 😛 ကဲကဲ စလိုက်ရအောင် . . .
အရင်ဦးဆုံး Window မှာပါတဲ့ Command Prompt ကို Administrator အဖြစ် ဖွင့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ အောက်က Key တွေကို Copy ကူးယူထားလိုက်ပေါ့။ Windows 10 Pro နဲ့ Pro N ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် ရှာကြည့်သလောက်ကတော့ N ဆိုတာ Europe အတွက်ဖြစ်ပြီးတော့ သူ့မှာ မီဒီယာနှင့်ပတ်သက်သောနည်းပညာများအားနည်းလွန်းတယ်ဆိုတဲ့ အဖြေကို တွေ့ခဲ့မိတယ်ပေါ့လေ။ နောက်ထပ် တစ်ခုကတော့ KN ပါ အဲဒါတော့ Korea ကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ တွေ့မိပြန်ကောပဲ။ ဆိုတော့ ကျွန်တော်ကတော့ 10 Pro ကိုပဲ အသုံးများတာဆိုတော့ . . . အဆင်ပြေတာကို စမ်းပြီး သုံးကြည့်နိုင်ပါတယ်ပေါ့ 😀
ဖွင့်လဲဖွင့်ပြီးသွားပြီ ကူးလဲ ကူးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ အောက်က အကြောင်းတွေကို ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ “Win10Pro-Key” မှာ ” အဖွင့်နဲ့ ” အပိတ် လေးကိုတော့ မထည့်လဲအဆင်ပြေပါတယ်။
cscript slmgr.vbs /ipk “Win10Pro-Key”
cscript ဆိုတာကတော့ Windows Script Host ဖြစ်ပြီးတော့ slmgr ကတော့ Software Licensing Management Tool ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ipk ကတော့ Key Management Service အတွက် Command Line ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့လေ။
နောက်တစ်ခါကတော့ kms.lotro.cc ဆိုတဲ့ Server ကို လှမ်းချိတ်ပြီး Window Key ကို Active ဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့ဟာပေါ့ဗျာ။
ချိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ ato ဆိုသည့် Operation System အတွင်းမှာရှိတဲ့ မည်သည့် Key ကိုမဆို Activation ဖြစ်အောင် လုပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့ အရာဖြစ်တာကြောင့် License Key လဲမှန်မယ်၊ Server နဲ့ချိတ်ထားတာလဲ မှန်မယ်ဆိုရင် . . . Windows 10 ကို Activate Windows အဖြစ် Windows is activated using your organization’s activation service ဆိုပြီး Activation အောက်မှာ မြင်တွေ့ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Video If you can’t Understand this post : 7ab_OeiROZg